China Parallel Slide Valve ho an'ny orinasa mpamokatra sy rafitra mpamokatra rano etona | Convista
Valve paride parallel ho an'ny rafitra rano-etona
Type Valve vavahady
tsindry PN20-50MPa 1500LB-2500LB
Izy io dia ampiasaina ho toy ny fitaovana fanokafana sy famaranana ho an'ny rafitra paompy na rafitra fantsom-pamokarana tsindry avo sy salantsalany misy turbine supercritical (ultra-supercritical) supercritical (ultra-supercritical) turbine unit an'ny 600 ka hatramin'ny 1000MW.
1.Izy io dia mandray rafitra fanamafisana ny tsindry, miaraka amin'ny fifandraisana mihombo amin'ny lafiny roa.
2.Izy io dia mandray valizy bypass elektrika amin'ny fidirana sy fivoahana amin'ny fandanjana ny tsindry tsy mitovy amin'ny fidirana sy ny fivoahana.
3.Ny mekanisma fanidiana azy dia mandray ny firafitry ny takelaka misy takelaka roa. Ny famehezana valve dia avy amin'ny tsindry antonony fa tsy avy amin'ny hery mihetsika mekanika mihodina mba hisorohana ny valizy tsy hiharan'ny fihenjanana mampidi-doza mandritra ny fisokafany sy ny fanidiana azy.
4.Miaraka amin'ny fantsom-panafody matevina miorina amin'ny kobalt, ny tarehy famehezana dia misy fanoherana ny hafanana avo lenta, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny abrasion, androm-piainana lava ary toetra hafa.
5.Mandalo anti-harafesina sy nitrogenization fitsaboana, ny vovo-kazo ambonin`ny manasongadina tsara harafesiana fanoherana, abrasion fanoherana ary azo antoka famehezana boaty fametahana boaty.
6.Izy io dia afaka mifanandrify amin'ireo fitaovana elektrika an-trano sy any ivelany izay hafahafa mba hahafeno ny fepetra takian'ny fanaraha-maso DCS ary hahatsapa ny asa lavitra sy eo an-toerana.
7.Hosokafana na akatona mandritra ny fiasana izy io. Tsy tokony hampiasaina toy ny valizy mifehy.
Previous: Valve fiarovana azo antoka lohataona feno lohataona (andiany W)
Manaraka: Forge Steel Trunnion nitaingina Valve Ball Welded tanteraka
Lohataona mihidy feno karazana niteraka feno pressu ...
3226 AWWA C509 NRS Valizy azo antoka mipetraka
Paompy miompana amin'ny vovo rano LVP